बिहिबार : के कार्य गर्दा शुभ र के गर्दा अशुभ हुन्छ ? पुरा हेर्नुहोस – च्यालेन्ज नेपाल
बिहिबार : के कार्य गर्दा शुभ र के गर्दा अशुभ हुन्छ ? पुरा हेर्नुहोस
December 17, 2020 challengenepalLeaveaComment on बिहिबार : के कार्य गर्दा शुभ र के गर्दा अशुभ हुन्छ ? पुरा हेर्नुहोस
हामी थोरै मात्र मानिस कुनै कार्य गर्दा बार हेरेर कुन बार के कार्य गर्दा ठिक हुन्छ वा कुन बार के गर्दा ठिक हुँदैन भनेर गर्ने गर्छौँ । तर हामी धेरै मानिस कुनै कार्य गर्दा धर्मशास्त्र अनुसार गर्दैनौं जे सुकै काम होस् जुनसुकैबार गरी रहेका हुन्छ । धर्मशस्त्रले भन्छ कुनै कुनै कार्य गर्दा जुनसुकै बार गर्नु हुँदैन यसरी गर्न नहुने बारमा ती कार्यहरु गरेमा अशुभ हुन्छ, जिवनभर समस्या आईरहन्छ, जिवनमा दुःख पिडा भईरहन्छ । जस्तै बिहिबार के कार्य गर्दा शुभफल मिल्छ र के कार्य गर्दा अशुभ फल प्राप्त हुन्छ तल भनिएको छ ।
यी कार्यहरु बिहिबार गर्दा शुभफल प्राप्त धर्मकर्म गर्नु:ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने शास्त्रमा भनिएको छ ।
लक्ष्मीको पूजा गर्नुहोस:बिहिबारको दिन लक्ष्मी नारायणको दिन मानिन्छ । यस दिन पुजा गर्दा लक्ष्मीको मात्र गर्नु हुँदैन । पुजा गर्दा लक्ष्मी नारायणको पुजासँगै गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले पतिपत्निबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहिबार यी कार्य गरेमा अशुभ फल प्राप्त :रौं काट्नु हुँदैन:बिहिबारको दिन कपाल वा दारी काट्नु अशुभ मानिएको छ । वृहस्पतिलाई जीवन अर्थात जीवन भनिएको छ । बिहिबार रौं काट्दा गुरु ग्रह कमजोर हुने भनिन्छ । यसो गर्दा शिरमा असर गर्ने र उमेर समेत कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
कपाल नुहाउनु हुँदैन:शास्त्रमा बिहिबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले बिहिबार कपाल नुहाउनु अशुभ मानिन्छ । महिलाको जन्मकुण्डलीमा वृहस्पति पतिको रुपमा रहने हुँदा यो दिन कपाल नुहाउनु नराम्रो मानिन्छ । बिहिबार कपाल नुहाउँदा पति र सन्तानलाई अशुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
दारी काट्ने वा नङ काट्ने गर्नु हुँदै:बिहिबार नङ काट्नु र दारी काट्नु अशुभ मानिन्छ । यस्ता कार्य बिहिबार गर्दा जागिरमा समस्या हुने र पदोनन्ती हुनुको साटो घटुवा हुने समेत सम्भावना हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
भारी कपडा धुने र फोहोर हटाउने काम नगर्नु नै उत्तम:बिहिबार कपाल धुने, कपडा सफा गर्ने, दारी काट्ने, रौ काट्ने, फेशियल, नङ काट्ने काम कहिले पनि नगर्नुस् । त्यस्तै घरको सरसफाइ माकुराको जालो हटाउने काम पनि बिहिबार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । बिहिबारको दिन भारी कपडा धुनु राम्रो मानिँदैन । बिहिबारको दिन ठूला-ठूला कपडा धुँदा अशुभ हुने मानिन्छ ।
बिहीबार घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्नु पनि नराम्रो मानिन्छ । बिहिबारमा घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्दा अशुभ हुने मानिन्छ । घरको सरसफाइ सकेसम्म बिहिबार नगर्नु नै राम्रो हुन्छ
नेपाली सुपरहिट कमेडी प्राङ्क भिडियो कबाडी बाइक हास्दा हास्दै बेहोस भयो धेरै जना हेर्नुहोस प्राङ्क भिडियो…
January 9, 2021 January 14, 2021 challengenepal
January 1, 2021 challengenepal